Sawirro: Ilaalada UN-ka oo u dabaaldegay joogitaankooda Soomaliya | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Sawirro: Ilaalada UN-ka oo u dabaaldegay joogitaankooda Soomaliya
Sawirro: Ilaalada UN-ka oo u dabaaldegay joogitaankooda Soomaliya
Ciidamada Ilaalada Qaramada Midoobe ee xilligan ku sugan Magaalada Muqdisho, ayaa u dabaaldegay sanad guurada 1-aad ee ka soo wareegatay joogitaankooda Somaliya.
Ciidamadan oo ka socda dalka Uganda, ayay hawshoodu tahay ilaalinta shaqaalaha Qaramada Midoobe ee rayidka ah, kana hawlgala Magaalada Muqdisho.
Ciidamadan, ayaa bishii July ee sanadkii hore bedel u ahaa ciidan kaloo Ilaalada Qaramada Midoobe ka tirsanaa, ka dib markii ay dhameysteen muddo sanad ah oo ay dalka jooggeen. Sanadkii 2015-ka, ayaa Magaalada Muqdisho la keenay ciidamadii ugu horeeyay ee ilaalo u ah Qaramada Midoobe.
Munaasabad Talaadadii lagu qabtay Xarunta Xalane, ayaa waxaa ka qaybgalay Wakiilka Qaramada Midoobe u qaabilsan arrimaha Somaliya, Amb. Michael Keating, Kuxigeenka Safiirka Uganda ee Somaliya, Amb. Nathan Mugisha iyo masuuliyiin kale.
Michael Keating oo ka hadlay munaasabadaasi, ayaa ammaan kala duldhacay ciidamadan, waxaana uu yiri “Sanadkii aad halkaan joogteen waxaa la qabtay doorashada Baarlamaanka iyo midda Madaxtooyada. Horumar weyn ayaana la gaaray iyo heshiisyo amniga ku aadan. Waxaa la qabtay shirweyne lagu taageerayo Somaliya.”
Waxaa kaloo uu yiri “Waxaa jirtay booqashooyin badan oo aad iyo aad u heer sareeyay, wasiiro badan oo arrimo dibadeed ayaa halkaan yimid. Idinkuna qayb baad ka aheydeen inay waxyaabahaasi qabsooman, maxaa yeelay idinku halkaan uma joogtaan inaad anaga oo keliya na ilaalisaan.”
Wuxuu intaa ku daray “Dadkaan kale maysan imaan lahayn, sababtoo ah mid ka mid ah waxyaabaha halkaan ku soo jiitay Somaliya way ogyihiin, marka ay yimaadan inay ka helayan, waa inaga oo siin karna amni. In badan baana idinkaga mahadcelinayaa.”
Amb. Nathan Mugisha, Kuxigeenka Safiirka Uganda ee Somaliya, ayaa sheegay in Qaramada Midoobe uu ka rajeynayo inay kordhiso tirada Ciidamada Ilaalada ee Shaqaalaha Qaramada Midoobe.
Michael Keating, ayaa billad sharaf guddoonsiiyay ciidamadaasi, iyadoo uu abaalmarin uga dhigay shaqo wanaagsan oo ay qabteen, mudadii halka sano ahayd ee ay Xalane ka hawlgalayeen.